Factory visit to three factories ( Eslite Garment, Leader paper, Htoo Int’l Indurtry Group) – CTUM
CHENS Myanmar ဖိနပ်စက်ရုံမှ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ် EC
Factory visit to three factories ( Eslite Garment, Leader paper, Htoo Int’l Indurtry Group) at Hlaing Thayer Industrial Zone and Shwe Pyitar Industrial Zone in Yangon, Myanmar. ( May 20, 2019) ဖင်လန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ လှိုင်သာယာနှင့် ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်များရှိ စက်ရုံ (၃)ခုသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း။ (၂၀၁၉ မေ ၂၀)
ဖင်လန်သံအမတ်ကြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် သစ်လုပ်ငန်း အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (BWI) ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် Trade Union Pro ၊ ဖင်လန်နိုင်ငံ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (SAK) နှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ သွေးစည်းညီညွတ်ရေးစင်တာ (SASK) ၊အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်း အလုပ်သမားနှင့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိူးရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချူပ် CTUM ၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် BWFM နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစက်မှု လက်မှုနှင့်ကုန်ထုတ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် IWFMတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါသည်။
ကိုယ်စားလှယ်များသည် စက်ရုံများရှိ အလုပ်၇ှင်များ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ စက်မှုလုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
ထိုနောက် ကုန်ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်များကို လေ့လာခဲ့ပါသည်။ စက်ရုံများရှိ အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂရုံးခန်းများတွင် အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုဆို်င်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
Factory visit to three factories ( Eslite Garment, Leader paper, Htoo Int’l Indurtry Group) at Hlaing Thayer Industrial Zone and Shwe Pyitar Industrial Zone in Yangon, Myanmar. ( May 20,
H.E. Ms. Riikka Laatu , Ambassador, Embassy of Finland (Myanmar), delegates of BWI, Trade Union Pro, SAK, SASK, U Zaw Aye Maung, Yangon Regional Labour Minister, Rakhine Ethnic Affairs, Ministry of Labour, Immigration and Population, CTUM, BWFM and IWFM. We observed the situation of Industrial Relations with factory owners and union members in their factory.
We visited the producing products area. And discussed the challenges of labour movements in union office room at factories.